कामना सेवाको ८ लाख ४९ हजार ९६३.७७ कित्ता सेयर आजदेखि लिलामीमा, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » कामना सेवाको ८ लाख ४९ हजार ९६३.७७ कित्ता सेयर आजदेखि लिलामीमा, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - कामना सेवा विकास बैंकको सोमबारदेखि सेयर लिलामी खुला भएको छ । सर्वसाधारण समूहको २ लाख १२ हजार १४६.८४ कित्ता र संस्थापक समूहको ६ लाख ३७ हजार ८१६.९३ कित्ता गरि जम्मा ८ लाख ४९ हजार ९६३.७७ कित्ता सेयर लिलामीमा ल्याइएको हो । यो लिलामीमा लगानीकर्ताले वैशाख ३१ गतेसम्म न्यूनतम १०० रुपैयाँ वा यसभन्दा बढी भाउ तोकेर बोलकबोल गर्नपर्नेछ ।
संस्थापक समूहले न्यूनतम १००० कित्ता र सर्वसाधारण समूहमा क्रमश १०० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइनेछ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल नागपोखरी काठमाडौं तथा एनएमबि बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी शाखाबाट बोलपत्र फारम भर्न र बुझाउन सक्नेछन् । यसैगरी, कामना सेवाको ज्ञानेश्वर काठमाडौं, बुटवल, पोखरा र नारायणगढ शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लिलामी सेयर बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।